GAROWE, Puntland- Madaxweynihii hore Puntland, hadana ah Xildhibaan katirsan golaha Aqalka Sare ee Barlamanka Federaalka Somalia, Cabdiraxmaan Farole, ayaa si kulul uga hadlay weerar shalay kooxda Al Shabaab ku qaaday fariisin ciidamada Puntland ku lahaayeen deegaanka Af-urur oo katirsan gobolka Bari.
Farole oo la hadlay Radio Garowe, ayaa tacsi u diray dhammaan dadkii iyo ciidamadi ku waxyeeelloobay weerarkaas, isagoo codsaday in lagu sameeyo baaritaan qoto dheer maadama falkaas uu ahaa mid aan horay uga dhici deegaanada Puntland iyo buuralayda Gal-gala oo ay ku dhuumalaystaan mallayshiyaad katirsan Argagixisada.
Cabdiraxmaan Farole oo hadda ku sugan Waddanka Australia, ayaa xukuumadda ugu baaqay inay talo isugu yeertay dadweynaha Puntland iyo saraakiisha ku xeel dheera arrimaha ciidamada si wax looga qabto xaaladda cakiran ee gobolka Bari.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in culayska kooxdan ka saaran koonfurta Somalia ay sabab u tahay inay si dhuumalaysi ah ku soo galaan deegaanada Puntland iyagoo doonaya inay ka fuliyaan weeraro argagixiso.
Mar uu ka hadlay weerarkii shalay iyo qaabka uu u dhacay ayuu Madaxweynuhu sheegay inay jirto dayacaad u baahan in la saxo islamarkaana la baaro cidda mas'uulka ka ahayd.
Ugu dambeyn Farole, ayaa ALLE uga baryay dadkii dhibaatadu kasoo gaartay weerarkaas inuu nacariistiisa kasoo waraabiyo.
Hadalka Madaxweynihii hore Puntland, ayaa kusoo aaday xilli weerar khasaaro badan dhaliyay uu ka dhacay deegaanka Af-urur oo 70KM u jira magaalada Bosaso, kaasoo mallayshiyaad katirsan Shabaab ku beegsadeen ciidamo katirsan Daraawiishta iyo dadka deegaanka oo u badnaa haween, Odoyaal iyo carruur.
Ilaa hadda dowladdu ma shaacin khasaaraha ka dhashay weerarkaas.
Farole: Musharxnimadeydu waa in Somalia lagu soo celiyo dowladnimo [ DHAGEYSO]
Puntland 08.04.2016. 18:28
MELBOURNE, Australia- Madaxweynahii hore ee Puntland Cabdiraxman Sheekh Maxamad Farole oo wareysi gaar ah siiyey idaacada SBS laanteeda Af-Somaliga ee dalka Australia ayaa sheegey in nidaamka awood qaybsi ee 4.5 yahay mid ku salaysan kala qaybin ...
​Farole "Xasan Sheekh Barri xilka ha wareejiyo" [Daawo]
Soomaliya 10.09.2016. 22:00
Farole oo la kulmay Jaaliyadda Somalida ee dalka Imaaraadka
Soomaliya 13.07.2016. 14:33
​RW Sharmake iyo Farole oo Dubai ku kulmay
Soomaliya 12.07.2016. 20:29
​Australia: Murashax Farole oo kulan sagootin ah loogu sameeyay Melbourne [Dhagayso]
Soomaliya 10.07.2016. 15:51
Jaaliyada Somalida Australia oo xaflad u sameysay Musharax Farole
Soomaliya 04.07.2016. 16:41
Farole oo ka tacsiyeeyay Geerida Maxamed Abshir Muuse [Dhagayso]
Puntland 26.10.2017. 14:13